Fombantsika olombelona mihitsy ity mifamandripandrika ity, sady tsy manavaka olona io ; eto izao dia ny Farisianina mihitsy no namandrika an’i Jesoa. Saingy toa mpijoko voajoko, mpamandrika ho voafandrika ihany, izy ireo amin’izany. Isika koa mety ho tratran’izany raha mbola mifamandripandrika foana. Aza ny ratsy ho an’ny hafa re no mahamaika antsika fa ny soa ho azy, sady mety tsy ho fantantsika akory hoe iza marina ity olona fandrihana ity. Eto izao, olombelona no mamandrika an’Andriamanitra. Isika koa rehefa kamo mivavaka, na noho ny sakramenta fotsiny, na noho ranona sy ranona, na noho ireo kajikajy maro isan-karazany ihany no handehanana mivavaka dia toa mamandrika an’Andriamanitra sy mamandrika tena ihany. Tsarovy mandrakariva fa zanaka tiany isika eo anatrehan’Izy Ray Andriamanitra ka tsy tokony hifamandrimpandrika izany.
Fanampin’izany, mpihatsaravelatsihy izay mifamandripandrika ka miaina ny “mody hoe”, kanefa tsy izany akory, mody tsara eo imaso fa vandana ivoho. Novakian’i Jesoa bantsilana ireto mody nanontany, hamandrihany Azy, hany ka niala maina, ginagina tery ! Mihanjahanja sy miharihary eo anatrehan’Andriamanitra ny ataontsika sy izay any am-po tsy miloaka any fa asakasantsika zatra manafina Aminy. Tsy misorona i Jesoa rehefa misy tsy mety fa manitsy sy mananatra mandrakariva. Adidy amin’ny maha iraka izany ka tsara alain-tahaka, indrindra amin’izao andro maneran-tany ivavahana ho an’ny Misiona izao, na ny maha iraka izany. Samy irahina isika noho ny batemintsika ka aza mitelin-kafatra na sarotra irahina na manodikodin-kafatra fa aoka ho iraka mahatoky, ny mahatafita hafatra no tanjona. Izany hoe tena miaina ny batemintsika.
Manaraka izany, eo anivon’ny fiaraha-monina isika kristianina fa tsy olon-kafa tsy akory ka olona isika aloha vao kristianina. Noho izany, tsy maintsy atao ny adidy maha olona eo amin’ny fiaraha-monina fa tsy atao latsa-danja amin’izany ny maha kristianina, tsy misy azo avela. Adidin’ny iraka ihany koa izany. Tsarovy fa satrin’ny mpaniraka ny ho lasa lavitra ny irahina fa tian’ny irahina koa anefa ny tsy hihetsika eo izy kanefa tafita ihany ny iraka. Koa tsy olombelona no maniraka antsika eto fa Izy Andriamanitra, amin’ny maha zanany antsika, koa ifanentana hatrany isika amin’izany fa adidy iaraha-manana. Aoka tsy hiroa fo isika na hikemo amin’ny manahirana manefa izany adidintsika izany satria tsy mora. Amen.